आज घटस्थापनाः जमरा किन र कसरी राख्ने ? - DURBAR TIMES
HomeNewsआज घटस्थापनाः जमरा किन र कसरी राख्ने ?
आज घटस्थापनाः जमरा किन र कसरी राख्ने ?
आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको दिनलाई घटस्थापना भनिन्छ । यो नवरात्रको पहिलो दिन हो । आश्विन शुल्क प्रतिपदाको दिनदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दसैंको विशेष रौनक रहन्छ ।
घटस्थापनाको दिनमा विधिपूर्वक भगवतीको आवाहन गरेर घटस्थापना गरिन्छ । साइतमा राखिएको जमरा दशमीको दिन आर्शीवादको रुपमा ग्रहण गरिन्छ । भगवतीको उपासना गरी दुर्गा भवानीमा विशेष तरिकाले जमरा राख्ने प्रचलन छ । केही ठाउँमा जौसँगै गहुँ, मकैलाई पनि जमरा उमार्न छर्ने गरिन्छ ।
नौ रथामा शैलपुत्री, ब्रहृमचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिरात्रिलाई पूजिन्छ । यसका साथै मातृशक्तिहरूमा ब्राहृमी, माहेश्वरी, कौमारी, इन्द्रायणी, चामुण्डा, वैष्णवी, नारसिंही, ईश्वरी, लक्ष्मीको पनि पूजा हुन्छ । ९ दिनसम्म ९ दुर्गाको विशेष पूजा गरिन्छ ।
घटस्थापनाको दिन सबैभन्दा पहिला वैदिक विधिपूर्वक दीयो, कलश र गणेश स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि संकल्प वाच्यमा त्रित्रा र बैवृद्धीको पूजा गरेर दुर्गा भवानीको शुभ फल प्राप्तका लागि संकल्प गर्ने र सुख शान्तिको लागि गायत्रीको जप पनि गर्नुपर्छ ।
जमरा राख्नुअघि सके हवन गर्ने, नसके दशमीको दिन हवन गर्न सकिन्छ । हवन गरिसकेपछि मात्रै घटस्थापना गर्नुपर्छ ।
नजिकको नदी, जंगल वा चोखो ठाउँबाट बालुवा वा माटो ल्याएर गाईको गोबरले लिपपोत गरिएकोे जमराघर वा दसैँघरमा जमरा राख्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै स्थापना गरिएको कलश राख्नुपर्छ ।
देवीलाई घडामाथि थाली राखेर दुर्गा यन्त्र अष्टाजन लेखेर घटस्थापना गर्नुपर्छ । र घडाको वरिपरि राखिएको शुद्धमाटोमा जमरा छर्नुपर्छ ।
नवरात्रभर भगवती दुर्गाका नौ स्वरूपको पूजा घडामा अवस्थित थालीमा गरिन्छ ।
त्यसमा दुर्गा भवानी सपरिवारको सशक्तिको आवहान गरेर पूजा गर्नुपर्छ । पूजा गरेर जमरा राखियो भने पक्कै पनि हाम्रो सुख शान्ति समृद्धि हुन्छ ।
यसरी छरिएको जमरामा बिहान बेलुका नित्य पूजा गरेर ९ दिन ९ रात चोखो पानी हाल्नुपर्छ । र विस्तारै जमरा पहेँलो हुन थाल्छ ।
जमरा जति राम्रा हुन्छन् त्यति भगवती प्रशन्न मानिन्छ । जमरालाई दुर्गादेवीको प्रसादका रुपमा विजयादशमीको दिन टीकासँगै समृद्धिको प्रतीक पहेँलो जमरा ग्रहण गरिन्छ ।
दुर्गा भवानीलाई सबैभन्दा मनपर्ने अन्नको रुपमा लिइन्छ जौलाई । दुर्गाको पूजा गर्दा जमरा आवश्यकता पर्ने भएकाले र अन्नहरुमा सबैभन्दा पहिले जौको उत्पति भएकाले पनि दसैंमा जौको जमरा राख्ने प्रचलन छ ।
जौ ६० दिनमा नै फल्छ । अनिकाल लाग्दा छिटो फल्ने अन्न भएकाले पनि यसको विशेष महत्व छ ।
जमरा आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्यको लागि पनि सुपाच्य, भोक लगाउने भएकाले जमरालाई महत्वका साथ लिइन्छ ।
दुर्गाको पूजा भएको बेला दसैँमा मात्र नभएर अरु बेलामा पनि हामीले भगवतीको पूजा आरधना गर्दा जमरा राख्ने गर्छौ ।
कसरी शुरु भयो जमरा राख्ने प्रचलन ?
वैधिक सनातन धर्मको आरम्भ एक अर्ब ९५ वर्ष पहिलेदेखि दशैँमा जमरा राख्ने परम्परा शुरु भएको बुझिन्छ । अहिले हामीले मनाइरहेका चाडपर्व अनाधि अर्थात हजारौँ वर्षअघिदेखि मनाउँदै आएको परम्परा हुन् ।
दुर्गा भवानीले आवश्यकताअनुसार आप्mनो हातहतियार उठाउनुपर्छ । मातृशक्तिलाई सबल बनाउन, देखाउन र समाजलाई एउटा दृष्टिकोण दिनको लागि दुर्गा भवानीको आरधना गरिन्छ ।
चारवटै नवरात्रमा जमरा राख्न मिल्छ ।
(संस्कृतविद् डा. भट्टराईसँग नेपाल प्रेसकर्मी शर्मिला पण्डितले गरेको कुराकानीमा आधारित)
Previous articleनेपालीको मुख्य चाड दसैं शुरु, आज घटस्थापना गरिँदै
Next articleशिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै आमुल परिवर्तनका लागि आफ्नो प्रयत्न रहने : शिक्षामन्त्री पौडेल